Ngaba ndingayithenga i-iPhone 12 okanye isaphulelo sangaphambili? | Iindaba zeGajethi
Ngaba ndingayithenga i-iPhone 12 okanye isaphulelo sangaphambili?
UPaco L Gutierrez | | ngokubanzi, Iiselfowuni
I-Apple ivelise ulindelo olukhulu ngenkcazo yoluhlu lwayo olutsha lwe-iPhone 12, ngaphandle kwamathandabuzo into ebilindelwe ngabaninzi, kuba sisiganeko sonyaka esisilandeleyo ngaphezulu kweminyaka eli-10. Kodwa Ulindelo alujoliswanga kuphela kwiimodeli ezintsha ezinikezelwe yiApple kodwa nakwiimodeli zangaphambili ezigcinayo kwintengiso. Kwaye ukuba iApple kulo nyaka ishiye ikhathalogu ebanzi yeetheminali zazo zonke iintlobo zabasebenzisi.
Olu luhlu lukhulu lweetheminali esizifumanayo xa sikhangela i-iPhone, lusenza sithandabuze, kuba uninzi lunokuthandabuza ukusebenza kwesiphelo sendlela esineminyaka emi-3 ubudala. Ukuba abasebenzisi beapile baqhayisa ngento ethile, kukuba izixhobo zabo zinobomi obuluncedo obukhethekileyo kwaye ndingatsho ngokuqinisekileyo ukuba kunjalo. Ukuba sidibanisa lo mgangatho wemveliso ukuba inkxaso yawo yokuhlaziya yeyona ilungileyo kwicandelo, esinemveliso ixesha elide kakhulu. Kule nqaku siza kubona i-iPhone ngaphambi kwe-12 eqhubeka nokusebenza kwinqanaba eliphezulu.
1 I-iPhone 8 / 8 Plus
3 I-iPhone XS / XS Max
I-iPhone 8 / 8 Plus
Siqala ngemodeli ethi, nangona ibisentengiso kangangeminyaka emi-3, ime ngokukuko kuyilo oluqhelekileyo, ubungakanani obulinganiselweyo kunye neenkcukacha ezifanelekileyo kuluhlu oluphezulu. Ngaphandle kokuqhayisa ngehardware, safumana i-terminal enyusa iprosesa I-A11 Bionic, iprosesa apho iApple iphawule khona ngaphambi nasemva, namhlanje iyaqhubeka nokusebenza njengosuku lokuqala phantsi kwayo nayiphi na imeko.
Isiphelo esenziwe ngealuminium kunye neglasi, sinokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nekhamera ekwaziyo ukubamba umgangatho ophezulu. Yayenye yee-iPhones zokuqala ezine-certification ze-iP67 ngenxa yoko inokuchasana namanzi nothuli. Ngexabiso langoku lenguqulo ye-iPhone 8 emnyama yangoLwesihlanu zimbalwa kakhulu iitheminali ezibonelela ngezi zinto. Ukongeza, ungonga ngakumbi nangakumbi ukuba uyithenga iphindwaphindwa kwiMarike yokuBuya, ukufumana izaphulelo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70 xa kuthelekiswa nexabiso layo elitsha.
Isikrini sinokukhanya okungaphezulu kokwaneleyo kuyo nayiphi na imeko kwaye iphaneli yayo yokubonisa yeRetina inikezela ngomgangatho ophawuleka kakhulu.
Ukuba siza kudla umxholo wemultimedia, inguqulelo yayo yokudibanisa enesikrini esingu-5,5 xa kuthelekiswa no-4,7 ″ yohlobo lwayo olucetyiswayo. Sinebhetri enkulu kuhlobo lwayo lwe-Plus eya kusinika ukuzimela okukhulu. Enkosi kwiprosesa yayo enamandla ine-iOS 14 ke siya kuhlaziywa kuhlobo lwamva nje. Ngokubhekisele kwikhamera, mhlawumbi eyona ndawo ibuthathaka, kuba ngaphandle komgangatho ophakamileyo kwiimeko ezintle zokukhanya, iyabhabha xa ukukhanya kungalunganga, inguqulelo ye-Plus inekhamera yesibini yefowuni yemowudi yemizobo.
Masihambe ngoku nge i-iPhone X, isiphelo esingumfuziselo esatsiba esikhulu kwaye sabeka imeko kwintengiso yemfonomfono. Alithandabuzeki elokuba isiphelo sendlela namhlanje esiqhubeka nokuba noyilo lwangoku oluhamba kunye nezixhobo ezinesakhono kuyo yonke into. Yayilutshintsho olukhulu xa kufikwa ekuvuleni i-terminal, ukusukela Sishiye ngasemva isivamvo somnwe somnwe (Isazisi sokuchukumisa) sinika indlela yokwazisa ebusweni (i-ID yobuso), ukongeza ishiya phezulu kwesikrini (inotshi) indawo yokuhlala kwikhamera yangaphambili, isithethi kunye ne-ID yobuso. Le modeli inesandi sestiriyo.
Iphawule imeko kwintengiso kokubini ukubonwa kobuso be-3D kusetyenziswa inkqubo yesikena yamanqaku, eskena ubuso bethu ngokweenkcukacha, zombini inotshi. Inotshi ukuba unanamhla iyaqhubeka nokugcina ezona modeli zangoku Njenge-iPhone 12 entsha. Ikwathetha notshintsho kwizinto zokwakha, ukwenza ukutsiba ukusuka kwialuminium kuye kwentsimbi engenasici, izinto ezinganyangekiyo kwizothuko kodwa ezibuthathaka ngakumbi kukuqhekeka, okunika ukugqitywa kwepremiyamu ngakumbi ngenxa yokugqitywa kwayo kwe-chrome.
Ngaphakathi sifumana iprosesa ye-A11 (efanayo ne-iPhone 8) ukuze kunjalo nge-iPhone 8 siza kuhlaziywa kuhlobo lwamva nje kwaye ikhamera enye ye-8 ijoyina inzwa yefowuni ukuphucula umgangatho wokusondeza. Ngaphandle kokulibala Isiqinisekiso se-IP67 kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo. Olunye utsiba oluphawulekileyo lwalunento yokwenza nescreen sayo, sisuka kwi-Apple's IPS Retina display feature to a Iphaneli ye-OLED eyenziwe yiSamsung. Ithuba elihle ukuba siyifumana ngexabiso elifanelekileyo.
I-iPhone XS / XS Max
Apha U-Apple uthathe ithuba lokwamkelwa okuhle kwe-iPhone X ukuqhubeka nemodeli yokuphucula kuphela izinto ezithile Ngokumalunga neyandulelayo, imiba enje ngophuculo oluncinci kwiimvakalelo zayo zokufota, ukuphucuka okuncinci kuwo onke amacandelo enza imodeli yenkwenkwezi yayo ijikeleze ngakumbi. Olu phuculo lukwabandakanya isatifikethi esingcono ngokuchasene namanzi nothuli, ukusuka kwi-iP67 ukuya kwi-iP68 evumela ukuba i-terminal igxunyekwe. Ukuphuculwa kuya kufumaneka kwiprosesa kunye ne-RAM, kunye neprosesa ye-A12 kunye ne-1GB ngaphezulu ye-RAM.
Apho sibona khona Ukutsiba okukhulu ngokubhekisele kwi-iPhone X kuhlobo lwayo lweMax, olusuka ku-5,8 ukuya ku-6,5 ″ lwescreen, Itekhnoloji efanayo ye-OLED eyenziwe yiSamsung, kunye neziphumo ngaphezulu kokhuphiswano lwayo. Oku kukhula kwesiphelo kuchaphazela nokuzimela kuba ubungakanani bebhetri bukhulu kakhulu. Ngaphandle kwamathandabuzo isiphelo sendlela esinobomi obuncedo obuninzi esele kwaye namhlanje ayinanto yakubamonela kuluhlu oluphezulu lwangoku.
Imodeli ngokungathandabuzekiyo ephawule inqanaba eliphambili kwintengiso xa iApple yangena kwintengiso yayo, ngokuthoba ixabiso xa kuthelekiswa ne-iPhone XS, endaweni yokusebenzisa ipaneli ye-IPS kwiscreen sakho kwakhona, ngeli xesha ingangumbandela ubungakanani bescreen se-6,1 ″ esiwa phakathi kweemodeli zeXS kunye neXS Max. Iscreen esithi ngaphandle kokubuyela kwi-IPS Retina yokubonisa itekhnoloji ngokungathandabuzekiyo ngumzekelo ogqibeleleyo wokuba izikrini ze-IPS zinobomi obungaphezulu kwesiqhamo, kuba iyadlala imibala eqaqambileyo kunye nabantsundu abacocekileyo.
Ukuncitshiswa kwexabiso kukwabonakaliswa kwizinto zalo zokwakha, ukubuyela kwialuminium emaphethelweni ayo. Inekhamera enye kuphela, kodwa le inye Ikhamera isetyenziswe kakuhle kwisoftware kangangokuba kwezinye iimeko ibalasele nangaphezulu kwezinye zeemodeli ezineekhamera ezi-2, ngakumbi kwimowudi yokuma. Ushicilelo I-iPhone XR ngoLwesihlanu omnyama Imodeli ekhuthazwayo kakhulu ukuba into esiyikhangelayo bubungakanani bescreen esihle ukujonga umxholo wemultimedia kunye nebhetri enkulu esinika ukuzimela ngeentsuku ezi-2 zokusebenzisa. Ineprosesa efanayo ne-iPhone XS, i-A12 Bionic.
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kunye nokuchasana namanzi njengoko iApple ibisenza oko ukusukela nge-iPhone 8, nangona isatifikethi siza kuba sezantsi, sihlale kwi-iP 67.
Siza kwesona sesinye seetheminali ezijikelezileyo ezenziwe nguApple kwimbali yayo, Ukudibanisa zonke izibonelelo ze-iPhone X kunye ne-XS, kodwa ukuyisa kwinqanaba elilandelayo. Sisiphelo esifumana ilifa loyilo ngokungathandabuzekiyo olwaba luphawu lweApple. Ukongeza koku iglasi yangemuva ye-matte ethintela ukuprintwa kweminwe ukuba kungaphawulwa njengoko kusenzeka kwiimodeli ezimenyezelayo. Njengonyaka ngamnye iprosesa iyakutshintsha igama layo lokunika amagama I-A13 bionic, Yandisa kancinci amandla ayo.
Ukuqhubeka ngasemva sifumana iikhamera ezi-3 ezigqwesa kuzo zonke iinkalo, ukusuka kwirekhodi yevidiyo, ukusondeza okanye i-angle ebanzi. Ngaphandle kwamathandabuzo a unkqonkqoze etafileni nguApple kwicandelo lokufota eliya kuyonwabisa kakhulu iigourmets. Kule nto kufuneka songeze ukubandakanywa ekugqibeleni kwe 18W itshaja ekhawulezayo kwibhokisi yayo, ishiya ngasemva i-5W eyayize ebhokisini kude kube ngoku. Kwicala lesikrini sifumana ukuphuculwa kwe-OLED ukuba i-X kunye ne-XS sele inyukile kodwa ngokuqaqamba okuphezulu kancinci.
Ukutsiba okukhulu kwesi sigxina ngokubhekisele kwabo bangaphambili kukubandakanywa kwebhetri enkulu ngaphandle kokunyusa ubungakanani, obubonisa ukuzimela okungazange kubonwe ngaphambili kwi-brand. Ukugcina ukuxhathisa kwamanzi nge Isiqinisekiso se-iP68 kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo. Ngokukhutshwa kwento entsha le modeli iphakathi kokhetho olufanelekileyo ukuba ujonge eyona premium kwi-Apple, ngexabiso eliphantsi.
Olona luqhubekeko lusemagqabini lwesona sitishi sithengiswa kakhulu ngu-Apple, i-iPhone XR, sisiphelo esiza kuzuza ilifa yonke into evunwe ngumanduleli wayo kodwa siyiphucule kwindawo nganye nganye. Yenye yeetheminali ezijikelezileyo esinokuzifumana namhlanje kwintengiso, Ukubonelela ngexabiso elinomtsalane nge-A13 processor bionic kunye nescreen esine-IPS Liquid Retina panel leyo Iyaphucula kwinto ebonakala ngathi ayinakoyiswa kwi-XR.
Kwicala lokufota, ayinakusikwa ngokuthelekiswa neemodeli zePro, ilahlekelwe kuphela yinzwa yefowuni yokusondeza, ngenxa yoko umgangatho weefoto awuchaphazeleki, Iprodigy yefoto yokuhambisa iifoto ngokuqinisekileyo eya kwenza kuzo zonke iimeko okusingqongileyo, nkqu nangaphakathi. Ulwakhiwo lwayo lwenziwe ngealuminium kunye neglasi ekhumbuza iXR. Iyakwazi ukurekhoda kwi-4k ngozinzo olulungileyo.
Olona phuculo lubalulekileyo ngaphezulu kwe-XR eyandulelayo, luya kubonakala kuzimela kuba lubandakanya ibhetri enkuluSikwasifumene isiqinisekiso se-iP 68 ngokuchasene namanzi nothuli, kunye nokutshaja ngokukhawuleza kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo. Isiphelo esirhangqi kakhulu ikwazile ukuzibeka njengesixhobo esithengisa kakhulu se-2020 egqwesa kude kakhulu kuzo zonke izitha zakhe kwaye ayisiyonto encinci.
Sikuphelisa oku kuhlanganiswa nendlalifa yesiphelo sokuqala kuluhlu, i-iPhone SE inoyilo olufanayo esele silubonile nge-iPhone 8, enobungakanani obumbeneyo. Yenziwe ngealuminiyam kunye neglasi enemibala eyahlukeneyo. Kwicandelo lokufota sifumana inzwa enye, kodwa nangona iphantsi kunaleyo yabazalwana bayo abadala, isebenza kakuhle kakhulu, iyafana ncam naleyo ibonwa nge-XR. Isikrini siyakufana ncam naleyo ifunyenwe kwi-iPhone 8, ipaneli ye-IPS ye-4,7-IP esemgangathweni olungileyo.
Iindaba ezilungileyo malunga nesi sigxina kukuba Ngaphandle kwexabiso eliphantsi, igcina iprosesa ye-A13 esetyenziswa lonke uluhlu lwe-iPhone 11. Esi sisiphelo sicinga ukubuyela kwisenzisi somnwe, esikwafumana njengelifa kwi-iPhone 8. Mhlawumbi uyilo lwayo luphelelwe lixesha ukuba siyithelekisa nabanye, kuba inezakhelo ezichaziweyo, kodwa kwelinye icala ubungakanani kunye neqhosha laseKhaya.
Ikwagcina i Isithethi esi-Dual, ukutshaja ngaphandle kwamacingo kunye ne-iP67 yokunganyangeki kwamanzi kule meko. Ngaphandle kwamathandabuzo sijongene Isiphelo kubaphulaphuli abachazwe ngokuchanekileyo, bekhangela ubungakanani obuncitshisiweyo kunye neqhosha lasekhaya ngaphandle kokucheba ngokweHardware kunye neempawu zeNkulumbuso ezibonwa kuphela kwiitheminali ngexabiso eliphezulu kakhulu. Ikwayindlela entle yokungena kwinqanaba kuye nabani na ofuna ukuzama i-iOS ngaphandle kokukhupha imali eninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ngaba ndingayithenga i-iPhone 12 okanye isaphulelo sangaphambili?
Eyona midlalo ifanayo kwiMinecraft yekhompyuter
IAmazon Echo Dot 4th isizukulwane, esifanelekileyo kwaye esihle [UHLAHLELO]